အကွေ့ အကောက်တွေနဲ့ 
မင်းက တခဏပဲ နားခိုသွားတယ်နော်…..။
ငါကတော့ တစ်ဘ၀စာ မှတ်လို့…
နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ နတ်သမီး…” ဆိုပြီး
လေးဖြူရဲ့ သီချင်းကို ဆိုပြမိခဲ့ …။
မင်းပေးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့
၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာရဲ့ ဒီ ပထမ ညချမ်းမှာ
”အချိန်မီသာ ပြင်ဆင်ခွင့် ” …တဲ့ ။
အချိန်တွေ နောက်ပြန်လှည့်လို့ 
မင်းနဲ့ မတွေ့ ခင် ဟိုး..အရင်ချိန်တွေကို
တချို့ က ဆိုတယ်…
ချစ်သူ့ လက်ကို တစ်ခါ ကိုင်ချင်တယ်…” တဲ့ 
မင်းအကြောင်း သိမ်းထားတဲ့ 
ငါ့ရင်ထဲက အကန့် လေး တစ်ကန့် ကို
ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ချင် ရဲ့ …
ငါ …သေသွား တဲ့အထိပေါ့…။
ငါ….. ယုံကြည်မှုတွေ လျော့ပါးလာပြီ
ငါဟာ မင်းရဲ့ ရတနာ မှ
ငါ. ချစ်ခြင်းက နင်. အတွက်ဆို
ငါ ဟာ နင်.အတွက်
ကြိုက်ရာ အစားသွင်းတဲ့ အထဲ
အတွက်ခက်မှာ ဆိုးတဲ့ စိတ်နဲ့
ငါ. တန်ဖိုးရဲ့ အတီမ်အနက်
ငါကတော. အဖြူကို အရောင် ထပ်ချွတ်တယ်
သတ်မှတ်ချက်တွေ ကင်းတဲ့ အရာ။
မာန်နတ်ရဲ့ နှုတ်ဖျားကိုရဖို့ 
ချစ်သူ ...ဒါတွေ ....မင်းသိရဲ့လား(ကဗျာ)
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်တွေနဲ့
ရင်မှာ ရည်မှန်း ချစ်ခဲ့တာပါ ချစ်သူ .. ။
နှစ်ကိုယ်တူ ဘ၀ အကြင်နာ ယုယမှုလေးတွေနဲ့
နွေးထွေတဲ့ ဘ၀လေး တည်ဆောက်ကြမယ်လို့
မင်းကို ဘယ်လောက်ကြီး ချစ်ပါတယ်လို့
မပြောတာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့လားကွာ ..
ကို ပြောလိုက်ရင် ...
မင်း အပေါ်မှာ ထားတဲ့ အချစ်တွေ
လျော့သွားမှာ စိုးလို့ပါကွာ ...
နားလည်ပေးပါ ချစ်သူရယ် .. ။
စစ်မှန်တဲ့ သစ္စာတရား လေးနက်တဲ့ အချစ်
မင်းအပေါ်မှာ ချစ်နေမယ်ဆိုတာရော ....မင်းသိပါ့မလား ..
အကြင်နာအနမ်းခါးခါး . . . .
ခရေ ပင်တွေ ပတ်လည် ၀ိုင်းနေတဲ့ ခရေ ပင်လမ်းထဲမှာ ဖြေးညင်းလေးတွဲ စွားလျှောက်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက် … တစ်ယောက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ယောက်ျားလေး .. ။ နှစ်ယောက်လုံး ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ အဓိပ္ပာယ် ရှိပြီး လက်ရှိဆန္ဒတွေ ပြည့် စုံ နေတဲ့ မျက်ဝန်း နက်နက်လေးတွေကိုယ်ဆီနဲ့ ညနေခင်းလေး ဟာ အလိုလို အထီးကျနမဆန်ပဲ လှပနေသည် ။
မိန်းကလေး ။ နင်ငါ့ကို တကယ်ချစ်လားဟင် ။
ကောင်လေး ။ သိပ်ချစ်တာပေါ့ကွာ။
မိန်းကလေး ။ ကောင်လေးရယ် ဒီစကားတွေဟာ နင့်ဆီက အကြားချင်ဆုံး စကားတွေပေါ့ ။ ငါသိပ်ပျော်တယ်သိလား ။
ကောင်လေး ။ ငါတော့ ဒီစကားတွေ ကို နင့်ဆီ ကမကြားချင်ဘူးကွာ ။
ကောင်မလေး ။ ဟမ် ! ဘာကြောင့်လည်း .. ။ ဘာကြောင့်လည်းဟင် ။
ကောင်လေး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် …………………
ကောင်မလေး ။ ငါကတော့ တကယ်ပဲ နင့်ဆီ ကဒီစကား အမြဲကြားချင်ခဲ့တာပါဟာ ။
ကောင်လေး ။ ငါကတော့ မကြားချင်ဘူးဟာ … ။ ကောင်မလေး မျက်နှာမှာ မျက်ရည် ကြည်တွေ ဥလာသည် ။ နောက်ပါးပြင်ထက်မှာ မျက်ရည်သောက်မြစ်ဘက်မှ မြစ်ဖျားခံ ပြီး စီးဆင်းလာသည့် ဆွေးခြင်း မျက်ရည်တွေနယ် ။
ကောင်မလေ ။ နင်ငါ့ကိုတကယ် မချစ်ဘူးပေါ့နော် ။ လွမ်းဆွတ်ငိုရှိုက်သံ နှင့် အတူ နှလုံးသားဆီ မှ တဆက်ဆက်နာကျင် တုန်ခိုက်သံ သည် တိတ်ဆ်ိတ်နေတဲ့ ခရေ ပင်လမ်းတစ်လျှောက် အကာအကွယ်မဲ့ စွာ ပျံလွင့်ကုန်သည် ။ နောက်တိတ်ဆိတ်စွာ လေညင်းတိုးသံ နှင့်အတူ ၀ိဥာဏ် ကင်းမဲ့နေသည့်အလား တစ်လှမ်းချင်းတစ်လှမ်း ချင်းနဲ့ ကောင်မလေး အိမ်နားသို့ ရောက်လာသည် ။
ကောင်မလေး ။ ဘာကြောင့်လည်း ။ ဘာကြောင့်လည်းဟင် သိခွင့်မရှိဘူးလားကွာ။
ကောင်လေး ။ နင်တစ်ကယ်ကို ပဲ သိချင်တာလားကွာ ။
ကောင်မလေး ။ အေးပေါ့ ။ နင်မချစ်ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တော့ သိချင်တာပေါ့ဟာ ။
ကောင်လေး ။ သူကောင်မလေး ကိုပွေ့ဖက်လိုက်သည် ။ နောက်အနမ်းချို ခါးလေး တစ်ချက် သူမ၏ နှာတံ ကြားလေးထဲသို့ ၀င်ခွေ့လိုက်သည် ။ နောက် သူမနားနားသို့ ကပ်ပြီး ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် နင့်ဆီက စကားလုံး သုံးလုံးလောက် တည်းနဲ့ငါ့အတွက် မလုံလောက်လို့ပေါ့ဟာ ။
ခရေပင်လမ်းတစ်လျှောက် ခရေပန်း များ ဝေဖြာပွင့်လန်းကုန်ကြလေပြီ ။ သိပ်ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ ပင်စည်ကြီး ကို ခိုင်မြဲအောင် ကုပ်တွယ်ပေးထားတဲ့ အမြစ်က ပြုံးပြီး ကြည့်နေသလို ပင်ဖျားမှ အကြင်နာ ပန်းတွေသည် ပွင့်လန်းလို့ ဝေဆာနေပေသည် ။
ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွနဲ့ မချိမဆန့်
ချစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ အပြောလွယ်သလောက်
ကြာလာတော့ အချစ်ဆိုတာကို စိတ်ကုန်လာတယ်
ယောင်လည်လည်နဲ့ အတိတ်မေ့ချင်သွားတယ် ..
နာကျင်နေပေမယ့် ငါ မငြီးတွားချင်ဘူး
ဒီလို ဒသနဆန်တဲ့ ဒဏ်ရာတစ်ချို့
ကြာလာရင် လမ်းပျောက်မှုတွေနဲ့ငါလမ်းမှောက်တော့မယ် ထင်တယ် ....
ကိုယ်ကျေကျေနပ်နပ် ပြက်လုံးထုတ်ပြပါ့မယ် …
ငါ သတိရခြင်း များစွာနဲ့ 
ဖွင့်ဖောက် ဖတ်မိတဲ့ နင့်ရဲ့ စာတစ်စောင်
မညီညာတဲ့ လက်ရေး လှလှ တွေအောက်မှာ
ငါ့ အသက် ပျောက်ချင်တယ်
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ 
အရက် လျှော့သောက် ဖို့ 
သောက နဲ့ အမှာပါး
မော ဟ နဲ့ ဗျာများခဲ့သမျှ
နင် အနေဖြောင့်တော့ ၊၊ ၊၊
ဇာတ်လမ်းဟောင်းကို အသက်သွင်းဖို့ 
နင် နဲ့ သွားခဲ့တဲ့ အအေးဆိုင် အိုနွဲ့ နွဲ့ လေးမှာ
ငါ ဖြေသိမ့်ဖို့ ထိုင်တယ်
စီးကရက်တွေ တစ်လိပ် ပြီး တစ်လိပ် ရှိုက်ဖွာ
သောက နဲ့ သက်ပြင်း တွေ မီးခိုးငွေ့ ကြား
နာရီသံတွေကြား အရင်လို နင်များ ငါ့ကို ချိန်းမလား အတွေးနဲ့ 
အဲဒီ ဆိုင်မှာ ငါ တစ်နေကုန်တယ်
ခြေကုန်လက်ပမ်း တွေ ကျလို့ 
ငါ ဒုက္ခ ကို မီးထွန်းရှာတယ် ၊၊ ၊၊
လရောင် အောက်က နီယွန် မီးရောင်တွေ အကြား
နင့် အိမ်ရှေ့ က အုတ်ခုံ မှာ ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့ 
ဝေဒနာ သက်သာရာ သက်သာ ကြောင်း
အရင် လို နင် ခန်းဆီးလေး ဖွင့်ပြီး
ငါ့ သီချင်း ခိုးခိုး ပြီး နားထောင်လေမလား
မီး ပိတ်ထားတဲ့ နင့်အခန်း လေး ငါတွေးဆွေး လို့ 
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငါ နားစွင့် မိတယ်
အို . . . နင့်ခြေသံ တွေလား ၊၊ ၊၊
ငါ့ အခန်းမီးပိတ်လို့လဲလျောင်း
အတွေးတွေ ဟိုတစ်စ တစ်စ ပျံ့ လွင့်
အရင်လို ငါ အိပ်မပျော်တိုင်း နင်နဲ့ ဖုန်းပြောဖို့ 
ငါ့လက်တွေ နင့်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ် ကျသွားတယ်
လူကြီးမင်း အစချီသော စကားသံများနဲ့ 
လိုင်းကိုဖြတ် ငါ မွန်းကြပ်နေခဲ့တယ်
အခု ဘယ် သောင် ကမ်း မှာ တင်နေလဲ ၊၊ ၊၊
လောကဓံ က ဘယ်လက်ဝါး ညာလက်ဝါး အစုံ နဲ့ 
နင် နဲ့ ငါ ကို ရိုက်ချလို့ အပြီးမှာ
ဒဏ်ရာတွေ ပရပွ နဲ့အတိတ်ကို လှည့်အကြည့်
ရာဇ၀င် ထဲ က နင် ငါ့ကို မျက်ရည်များနဲ့ ပြုံးပြတယ်
ငါ့ အခန်းတံခါးကို ခေါက် နင် ခြေရာဖျောက်လို့ 
နင့်ကို ငါ ခပ် ပါးပါးလေး မြင်လိုက်တယ်
နင် နေလို့ မှ ကောင်းပါစ ၊၊ ၊၊
ဘ၀ ပေါ်က ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ
ငါ အခု စမ်း မလျှောက်တော့ဘူး
မလျှောက်ရဲလို့ တော့ မဟုတ်ဘူး
ငါ့ ညာလက်မောင်း ကို အားတင်းလိုက်ချိန်မှာ
ငါ့ ဘယ်လက်မောင်းမှာ မှီ နေမဲ့
နင့် ပါးဖောင်းဖောင်းလေး တစ်စုံ ရှိမှ မရှိတော့ပဲ
ရူးနှမ်းခြင်း များစွာ နဲ့ 
ငါ မျက်ရည်များ ဖြင့် ထူးချွန်ခဲ့တယ် ၊၊ ၊၊
နွေအိုဟောင်း ကာလက ဥသြတွန်သံ ကြားမှာ
ငါ့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ အထိ နင့်ကို လွမ်းတယ်
သစ်ရွက်ကြွေတွေကြား ရင်ခုန်သမှု နဲ့ 
အခု လောကဓံ တွေကြားမှာ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ 
နင့် ကို လိုက်ရှာနေမိတယ်
အို . . .ပျံလေတဲ့ ငှက်ခါး ဘယ်အကိုင်းမှာ မင်းနားသလဲ ၊၊ ၊၊
ငါ သတိရခြင်းများစွာနဲ့ 
ငါ့ကို ဆရာဝန် က ဆေးမှန်မှန် သောက် တဲ့
အဲဒီ ဂျူတီကုတ် အဖြူရောင် အင်္ကျီတွေ နဲ့ လူတွေ ရဲ့ 
ဂရုဏာ မျက်လုံးတွေ ငါ သေလောက်အောင် မုန်းတယ်
စိတ်လျှော့ ပြီး ဖြေသိမ့် ငါ သည်းခံနေလဲ
နာရီများ အကြားက ဆေးသောက်ချိန် ဆိုတာကို
ငါ ပုံမှန် ရှောင်ပြေးတတ်နေပြီ ၊၊ ၊၊
နင့် နဲ့ မတွေ့ ရတဲ့ ကာလ ပတ်လုံး မှာ
ငါ့ အလွမ်းမျှော်စင်ပေါ်က ဒဏ်ရာသမိုင်းတွေအကြောင်း
ငါ့အမေ ကို ရင်ဖွင့် ပြမိတယ်
“ သား ပင်ပန်းနေမယ် အိပ်လိုက်တော့တဲ့ ”
ငါ နင့်စိတ်နဲ့ သေရတော့မယ်ဟ ၊၊ ၊၊
ငါ အိပ်ရာထက် က တိတ်တဆိတ် နိုးထ
အခန်းတံခါး အသာဟ လို့ 
ခြေဦးတည့်ရာ ငါ ပြေးထွက်ခဲ့တယ်
ခြေသံတွေ တရှပ်ရှပ် နဲ့ 
ခေါ်သံတွေ ထပ်လို့ငါ့နောက်ကို သူတို့ ပြေးလိုက်
ငါ့ကို ချုပ်နှောင်လို့ဒဏ်ရာအသစ်တွေ ထပ်ပေးကြတယ်
အဆောက်အဦ တစ်ခု က အခန်းငယ်လေးမှာ
ငါ့ ကို လှောင်ပိတ်လိုက်ကြတယ်
ကုတင်ပေါ် မှာ မှေးစက် လို့ 
လူတွေ ကြားက အမေ့ မျက်ရည် ငါ့ရင်မှာ မချိဘူးဟာ ၊၊ ၊၊
ငါ အခန်းတံခါးကို ထုနှက်
ငါ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့် ပေးဖို့သူတို့ အားလုံးကို
မှန်တံခါးအ၀ က သောကနဲ့ ချောင်းကြည့်တဲ့ အမေ့မျက်နှာကို အမြင်မှာ
ငါ သတိကို ကပ်လို့ နေရာမှာတင် ခွေခွေလေးလဲတယ်
နင် ဘယ်မှာလဲ ဟာ ၊၊ ၊၊
နင် မရှိတဲ့ ကောင်းကင် မှာ
ငါ လ မသာ ချင်တော့ဘူး
ငါ အလွမ်းများနဲ့တေးမသီချင်တော့ဘူး
လက်တွဲလို့ လျှောက်ခဲ့သမျှ လမ်းတွေ ဟာ
လက်ချင်းဖြုတ်ပြီး အရာရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆိုရင်
အပေးအယူ မမျှ တ တဲ့ လောကဓံကြားမှာ
ငါ နှစ်ခါပြန် သေလိုက်မယ် ၊၊ ၊၊
င့ါကို မေမေက ချော့မြူလို့ထမင်းကျွေးတယ်
ငါ မှ မစားချင်တာ ဟာ
နင့်ကို တွေ့ လိုက်ရရုံနဲ့ အာဟာရ သိဒ္ဓိ ပြီးစေမဲ့ အကြောင်း
ဘ၀ဟောင်းက ၀ဋ် က ငါ့ လက်ရှိကို
ကံကြမ္မာ ရယ် အငြိုးရှိရင် ကျေလှည့်ပါတော့ လား ၊၊ ၊၊
ငါမုန်းတဲ့ ဂျူတီကုတ် နဲ့ လူက ငါ့ကို ဆေးချော့မြူတိုက်တယ်
သူတို့ အားလုံးက ငါ့ကို ဂရုဏာ နဲ့ ဖြောင်းဖြ လို့ 
ငါ စိတ်ပျော်အောင် နေခိုင်းကြတယ်
ငါ့ကို လူရာ မသွင်းကြတော့ဘူး လား
“ကျုပ်မရူးဘူး ခင်ဗျားတို့ အားလုံးရူးနေကြတာ”
အဲဒီ နေရာ က ငါ ဒေါသ နဲ့ပြေးထွက်
နင် လဲလျောင်းရာ မြေမှာ ဒူးထောက်လို့ 
နောင် တစ်ဘ၀မှာ ဆုံဆည်းခွင့်ကို ငါတောင်းတယ်
ငါ အားတင်းထားလဲ မျက်ရည်တွေ ကျမိတယ်
ငါ အသိတရားတွေကို စုစည်း
နင် နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် အရပ်
ငါ လျှောက် ထွက် လာ ခဲ့ ပြီ
ငါ့ရဲ့အ တိ တ် က စာ မျက် နှာ တိုင်း မှာ
နင် ရှိ နေ ခဲ့ တယ် ၊၊ ၊၊
ရူးရဖို့နဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာ….။ ။
ဇူလိုင် ၁၅ ၊ ၂၀၀၀ အမှတ်တရ
ငိုနေသလား ၊ ပျော်နေသလား
ကြေကွဲနေသလား ၊ ဆွေးနေသလား
မျှော်လင့်နေသလား ၊ ဥပေက္ခာပြုထားသလား
တနေ့ နေ့  . . . တော့
သူ့အပြုံးလေးတွေ . .
တခါပြန်. . ငေး ခွင့် ရ။
သူ့အနမ်းတွေ . .
တခါပြန်. . တွေး ခွင့် ရ။
သူ နဲ့ အတူဆိုတဲ့ အိပ်မက်များစွာ မှန်း ခွင့် ရ။
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပန်း ပွင့် စေ။
သူ့အတွက် အလွမ်းတွေ တနင့်တပိုးထမ်း
သူ ပြန်လှမ်းလာဖို့ ဆုတောင်းတို့ ပြည့်စုံ
ကမ္ဘာပျက်တဲ့ထိ အနမ်းတွေ ဆက်
သူ့အပါးခစားခွင့်တို့ မူပိုင်ရ လို့
သူ့ကို . . .တဘ၀စာ သိမ်းပိုက် ခွင့်ရပါရစေ။
သေချာစွာ . . သူ ပြန် လာမှာ ပါ
တ နေ့ နေ့ ပေါ့
(ကျွန်မ ယုံကြည်နေပါရစေ မောင်ရယ်)
မင်းမချစ်ရင်လည်း အဝေးက ကြည့်နေရုံပဲပေါ့
ငါကို ချစ်ပါလို့ ပြောခွင့်မှ မရှိတာ
မင်းမုန်းရင်လည်း အဝေးက ချစ်နေရုံပဲပေါ့
ငါကို မမုန်းပါနဲ့လို့ တားခွင့်မှ မရှိတာ
မင်းသတိမရရင်လည်း အဝေးက တမ်းတနေရုံပဲပေါ့
ငါကို သတိရပါလို့ ပြောခွင့်မှ မရှိတာ
မင်းဂရုမစိုက်၊ လျစ်လျူရှူထားရင်လည်း အဝေးက တောင်းတနေရုံပဲပေါ့
ဂရုစိုက်ပါ၊ လျစ်လျူမရှူပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုခွင့်မှ မရှိတာ
ငါဟာ မင်းရဲ့ချစ်သူ ဖြစ်ခွင့်ရှိလေရဲ့
အလိုချင်ဆုံး 'ဆု' တစ်ခုကို
အဆုံးတစ်ဖက်အတွက် ..ရုန်းထွက်ဖို့မစဉ်းစားမိပါဘူး . . .
ယောင်လို့တောင် မတွေးလိုက်နဲ့ဦး . .
ပြောပြရင်းနမ်းမိခဲ့တယ်. . ။ ။